Cantinho da Serra -Igumbi elimnandi le-2
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguClaudiane
Thatha ikhefu ukuze uphumle kule Cantinho da Serra.
Igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela eli-1 ngaphandle kwegumbi lokulala ukuze kwabelwane ngalo nelinye igumbi lokulala.
Yonke into elapha kukwandiswa kokukhetha kwethu ukuhlala kule kona ikhethekileyo yeMinas Gerais! Ukukhetha ubomi basemaphandleni, kunye nayo yonke into elula kunye nobutyebi onokuthi unikwe amaphandle.
Amagumbi entengiso lulwandiso lwendlu yethu;
Indawo yokutyela lulwandiso lwekhitshi lam;
Isitiya semifuno, ukwandiswa kokhathalelo lwethu;
Iingxangxasi, ukwandiswa kweyadi yangasemva!
Sifuna ukuba uzive wamkelekile kwaye ukwazi ukonwabela ngokupheleleyo konke umasipala wase-Ipoema kunye neendawo ezingqongileyo ezinikezelayo. Yiza uthathe ikhefu ukuze uphumle 'kwiCantinho da Serra' yethu.
Ukongeza kuzo zonke ezi mpawu kunye namakhubalo e-'roça', sikwanenzuzo eyodwa esinokukunika yona:
Isidlo sasemini kunye ne-BACKFAST ibandakanyiwe kwireyithi.
Yile nto uyifundayo! Silungiselele isidlo sakusasa esikhethekileyo kwaye sikumema kwisidlo sasemini! Sinikezela ngokutya okumnandi okuvela eMinas Gerais, okwenziwe kwisitovu senkuni ngeemveliso ezikhuliswe sithi kwaye zihlala zisentsha.
Yiza uphile la mava awodwa!
Ummandla waseManá, kufuphi neCachoeira dos Marques
Umbuki zindwendwe ngu- Claudiane